Sababta oo ah isbeddelada istaraatiijiyadeena deeqsiinta ah, waxaan soo gabagabeynay aagagga barnaamijyada soo socda, kuwaas oo aan mar dambe aqbalin codsiyada deeqda: Waxbarashada, Gobolka & Bulshada, Wabiga Mississippi, iyo Koonfur-bari Aasiya.
10 sano oo maalgelin ah kadib, McKnight wuxuu soo gabagabeeyey barnaamijkeenna Waxbarashada. Waxaan xushmeyneynaa deeq bixiyeyaashayada iyo horumarkooda ku aadan u diyaarinta ardayda reer Minnesota guul, anagoo ku mashquulineyna qoysaska iyo maalgashiga barayaasha.
Ka dib 17 sano oo maalgelin ah, McKnight wuxuu soo afjaray barnaamijkeenna Degmooyinka & Bulshooyinka. Waxaan xushmeyneynaa deeq bixiyayaasheena iyo horumarkooda abuuritaanka jaaliyado lagu noolaan karo iyo in la balaariyo fursadaha dadka oo dhami inay guuleystaan.
Ka dib 27 sano oo deeq ah, McKnight wuxuu heystaa dhamaaday barnaamijka Mississippi River. Waxay si buuxda qoraxdu u dhici doontaa illaa 2021. Waxaan sharfineynaa deeq-bixiyeyaashayada iyo horumarkooda ku saabsan soo celinta tayada biyaha iyo adkeysiga biyo-mareenkan weyn.
35 sano oo maalgelin ah kadib, McKnight wuxuu soo afjaray barnaamijkeenna Koonfur-bari Aasiya. Waxay si buuxda qoraxdu u dhici doontaa illaa 2021. Waxaan xushmeyneynaa deeq-bixiyeyaashayada iyo horumarkooda ku aadan taageeridda habnololo waara iyo xuquuqda Kheyraadka dabiiciga ah.